Ndizamile uKubuntu kwakhona kwaye ndonwabile. Ndikuxelela ukuba kutheni | Ubunlog
Kwiminyaka eliqela eyadlulayo, phakathi kwe-2015 kunye ne-2016, ndazama uKubuntu okokuqala kwaye ndiyenzile amatyeli aliqela ukusukela ngoko. Ndiyithandile imbonakalo yomsebenzisi, kodwa bekusoloko kukho into engahambanga kakuhle ngam kwaye ndigqibele ndibuyela ku-Ubuntu. Kutshanje ndibhale malunga ne KDE, Ndizamile uKubuntu kwakhona Ndabona iincukuthu endingazithandiyo, kodwa ndathi ndakubuyela ku-Ubuntu ndaqonda ukuba enye yazo (ingxaki yokukhuphela iipakeji) yayixhaphakile iiyure ezimbalwa. Ndiva ukuba ngeli xesha yonke into izakulunga, ndiyibuyisile kwaye ndonwabile. Ndizicacisa izizathu.
Ndibhale eli nqaku ngexesha lam elisecaleni. Kuyo ndiza kukuxelela ngayo yonke into endiyifumeneyo okoko ndayifaka kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Phakathi kwezihloko okanye amanqaku oza kuwabona apha ngezantsi kuya kubakho usetyenziso, imisebenzi kunye nenani elingenasiphelo leenkcukacha ezincinci ezindenze ndathandana nencasa ye-Ubuntu esebenzisa Indawo yemizobo ye-KDE Plasma. Enye yazo kukuba iyasebenza, into ethi, kwimeko yam, ibingahambi kakuhle ngoku.
1 Kubuntu: kuyakhawuleza, kuyancipha kwaye kuhle
2 Izicelo ezinomdla
2.1 ICantata: njengeAmarok, kodwa icocekile
2.2 Umboniso: izikrini kunye neengcebiso
2.3 I-KSysGuard-Inkqubo yokuHlola
2.4 UGwenview: umbukeli womfanekiso ngeendlela ezinomdla
2.5 Umphathi wokwahlula i-KDE: GParted, kodwa kuhle
2.6 I-KNotes: emva kwayo yonke idesika
2.7 Ihlengethwa: umphathi wefayile onamandla… ngokusikelwa umda
3 Qalisa imenyu ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo
5 Izinto ezibonakalayo okanye iiwijethi
6.1 Utshintsho lwezinto endizithembileyo
6.2 Ndingaphila naloo nto
Kubuntu: kuyakhawuleza, kuyancipha kwaye kuhle
UKubuntu mhle. Nanini na xa kufuneka ndibhale ngayo, i-KDE okanye iPlasma ndiziva ngathi ndiyifaka. Kwaye ndiyenzile. Kwaye ndiyayithanda. Ujongano lwayo lucocekile, luyilwe kakuhle, iziphumo zalo zinomtsalane ngaphandle kokuzibaxa kakhulu. Ibonakala intle. Okona kulungileyo kuko konke Kuluvuyo emehlweni ngaxeshanye ukuba lulwelo kwaye unkqonkqoze kwiinkuni, uzinze. Yonke into iyangena kwaye kwi «yonke into» sinokukhetha okuninzi, imisebenzi, iingcebiso ...
Kuba uKubuntu ngu Enye yeenkqubo zokusebenza ezinokwenziwa ngokwezifiso phaya. Ngokukhawuleza nje ukuba ndifake iinguqulelo zeBuntu zakutshanje ndiza kufaka iRetouching ukuze ndikwazi ukuhambisa amaqhosha ngasekhohlo ngaphandle kokufunda umgca wokuyalela okanye ukwenza uphando oluninzi. Kwi Kubuntu olu lukhetho oluza ngokwakhona. Ngapha koko, inokwenziwa ngokwezifiso ukuba sinokuhambisa elinye lamaqhosha. Awuyi kundikhanyela ukuba kulungile.
Kubuntu akanalo itheko Kwaye, emva kweminyaka emininzi kwi-Ubuntu okanye kwi-MacOS, kuya kufuneka uyiqhelanise nayo. Banokufakwa, kodwa ndigqibe kwelokuba ndibeke ipaneli encinci ngasekhohlo efihliweyo ngokuzenzekelayo ukufikelela kuzo zonke izicelo endizithandayo: IFirefox, iDolphin, iSpectacle, iCantata, ukufumanisa, ezam iziqalisi ("Xkill" kunye ezintathu ukuguqula imifanekiso)… kwaye zonke zilula. Ungongeza iindlela ezimfutshane kwibar esezantsi, kodwa andifuni ukuba nebar egcweleyo yokufikelela kunye nokuvula usetyenziso.
Ukuba awuthandi umfanekiso kaKubuntu (uqhekeko!), In Fumanisa ukuba kukho icandelo lokongeza. Phakathi kwezi zongezelelo siya kuba nemixholo, ii icon kunye nabanye. Kucacile ukuba sinamathuba okusebenza kulo lonke ulwabiwo lweLinux kodwa, ngale ndlela, into elungileyo malunga nohlobo lwe-KDE loBuntu ziziphakamiso ezibeka yonke into phambi kwethu.
ICantata: njengeAmarok, kodwa icocekile
Isikrini esikhulu seCantata
Iscreen solwazi lweCantata
Kude kube kutshanje kwaye ukuba andiphazami, umdlali owayefakwe nguKubuntu yayinguAmaroK. Sele ndisebenzisa i-AmaroK xa ndiqala ukusebenzisa iLinux kwaye, ndivela kwiWindows apho bekukho inkqubo egqibeleleyo nelungelelanisiweyo ebizwa ngokuba MediaMonkey, Ndabona yonke into yahluke kakhulu kwaye ingcolile. Kwakukho ulwazi oluninzi kwiscreen esinye, nangona kuyinyani ukuba iAmaroK igqibelele kakhulu. Andingenguye umlandeli omkhulu wesoftware yomculo kaKubuntu, kodwa oku kutshintshile nge ImvumiInkqubo entsha yokumamela umculo ebandakanya uKubuntu ilula kakhulu, njengeRhythmbox, kodwa inomdla ngakumbi, nayo yonke into ekwi-KDE. Kwikona ephezulu ngasekunene sinamaqhosha ane "i" ngolwazi, sicofa kuyo kwaye, voilà!, Sinalo lonke ulwazi malunga neqela, ialbham kwanamazwi engoma. Konke okungagqibekanga kwaye ngaphandle kokuchukumisa naluphi na uqwalaselo.
Singayiqwalasela info kwesikrini ukubonisa ifoto yeqela elingezantsi kwesicatshulwa, enomtsalane kakhulu. Inemowudi emnyama, kodwa ndiyicimile ngenxa yokuba ndiyenze yasebenza imo emnyama eseplasma (ubuncinci kwi-v5.15.2).
Umdlali omncinci kwi-bar
Umdlali omncinci ukusuka kwitreyi
Kwakhona ine mini-player ezimbini ezakuvela xa ucofa kwi icon ethi "Dlala" kwi ithreyi okanye ngokuhambisa ngaphezulu kwesicelo esincitshisiweyo kwibar. Nangona zingezizo ezona zintle kwezi zikhoyo, zisebenza ukuqhubela phambili inqaku lokudlala okanye ukutshintsha umkhondo. Ukuba sicofa ubhontsi oqaqambileyo ophuma kwifayile ye- ithreyi iyakuhlala injalo ngonaphakade. Kwaye uyazi ntoni? Ngalo lonke ixesha bendibhala eli nqaku bendimamele umculo kwaye khange ndive ukusika okuncinci njengoko ndenzile ngo-Ubuntu + Firefox + Rhythmbox.
Umboniso: izikrini kunye neengcebiso
Lo Mboniso ngumboniso. Ayikuko kuba yenza izinto ezinye izixhobo ezingazenzi, kodwa ngenxa yayo ukusetyenziswa ngokulula kunye neengcebiso. Ngokukhawuleza ukuba ucinezela iqhosha "lokuprinta isikrini", liza kuvela, elingafaniyo nezinye izicelo. Yintoni eyahlukileyo yile sinayo apha ngezantsi:
Ukusuka Cwangcisa Singahlela igama apho ukubanjwa kuya kugcinwa khona, ulwandiso, isikhombisi, sisebenzisa imvelaphi yokukhanya okanye sikhumbule indawo ekhethiweyo.
Ukusuka Zixhobo Singavula ifolda apho kugcinwa khona iifoto, ziprinte okanye "Rekhoda isikrini". Le yokugqibela ayiyonxalenye yeSpectacle, kodwa iya kuphakamisa ukuba sifake i-Peek ukurekhoda i-GIF yendawo ethile okanye i-SimpleScreenRecorder ukurekhoda yonke into eyenzekayo kwidesktop yethu kwividiyo.
Ukusuka Ukuthumela ngaphandle sinokuvula ukubanjwa esikwenzileyo kwenye inkqubo. Oku kundilungele kakhulu kuba ndingayivula ngokuthe ngqo kwi-Shutter ukongeza iintolo okanye olunye uphawu okanye kwi-GIMP ukongeza utshintsho oluntsonkothileyo.
Iqhosha Gcina Ekuqaleni ibisithi "Gcina njengo" kwaye ndiyitshintshile ukuyigcina ngqo kwiJPG kwaye ndiyigcine kwidesktop yam enegama "capture".
Kufuneka iqatshelwe ukuba zonke iinketho zokubamba eziBonakalayo (iwindow, uxande, njl. Njl.) Ziyavela "Ukukhangela" kwaye sinokongeza indlela emfutshane kwiiFavorites.
I-KSysGuard ibonisa ukuba yeyiphi eyona nkqubo iphambili
Njengomphathi wokwahlula endiza kuthetha kamva, kufuneka ndikhankanye KSysGuard usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows kuba inomfanekiso ococeke ngakumbi kunokhetho lwe-GNOME. Ukongeza, njengoko ubona kuphawulwe ngotolo, i-KSySuard isibonisa i-icon kwinkqubo ephambili yenkqubo, into endiyikhumbulayo ukuba ise-Ubuntu kwaye iza iluncedo ukuba into esiyifunayo kukuvala inkqubo bafumanise ukuba ukutya izinto ezininzi kuthetha. I-Rambox yinkqubo entle ekuvumela ukuba ufikelele kwiinkonzo ezahlukeneyo zewebhu ezizenzekelayo okanye ukongeza ezinye. Ndongeze iiakhawunti ezimbini zeTwitter zeLite kunye neInoreader apho. Kodwa ngamanye amaxesha kunzima kakhulu.
UGwenview: umbukeli womfanekiso ngeendlela ezinomdla
El Umbukeli womfanekiso weKubuntu ngu Gwenview. Njengayo yonke into ekuPlasma, inomtsalane ngokubonakalayo, kodwa eyona nto ndiyithandayo kukuba kulula kakhulu ukuguqula imifanekiso kwezinye iifomathi, ukuzityala okanye ukutshintsha ubungakanani bazo. Okwangoku andikhumbuli ukuba umbukeli womfanekiso we-Ubuntu unokhetho okanye, ukuba kunjalo, azibonakali kangako. Le yeyona nto ndiyithandayo ngoKubuntu: emva kweminyaka ndingayisebenzisi, yonke into ibonakala isondele okanye inomdla kakhulu.
Umphathi wokwahlula i-KDE: GParted, kodwa kuhle
Ulawulo lokwahlulahlula kwe KDE
Kwafuneka ndiyichaze. Ndicinga ukuba ndiyakhumbula ukuba Ubuntu beza ne-GParted ngokungagqibekanga kodwa, andazi ukuba kutheni, okanye mhlawumbi kukhuseleko, ayenzi njalo. UKubuntu ucinga ukuba sisixhobo esibalulekileyo, into endivumelana nayo, kwaye ibandakanye ne-GParted yayo. Ithiyiwe Ulawulo lokwahlulahlula kwe KDE kwaye intle ngokufanayo, kodwa ngomfanekiso oPolishiwe wePlasma. Kwaye ukuba uKubuntu uza neenketho ezininzi emva kokufaka ukusuka ekuqaleni.
I-KNotes: emva kwayo yonke idesika
En KNotes Sinesicelo esifanelekileyo kwabo bangenayo imemori elungileyo. Kukangaphi sibona indawo yokusebenza enekhompyuter egcwele i-post-its stick on the screen? Ngenxa yoko kukho isoftware enje. Iza ifakwe ngokungagqibekanga kwaye sinokudala amanqaku ngemibala eyahlukeneyo, ifonti, ubungakanani kwaye enye okanye ezingaphezulu zifihliwe okanye zibonisiwe. Iya kusivumela ukuba siqwalasele izaziso ukuze inqaku livele kwiscreen njengesikhumbuzo xa siyibonisa.
Ihlengethwa: umphathi wefayile onamandla… ngokusikelwa umda
El Umphathi wefayile kaKubuntu yiDolphin. Inokhetho oluninzi kuneNautilus, umzekelo, phakathi kwayo ekufuneka sikhethe ifayile kwaye siyitsalele kwenye indawo, ukhetho lokuHambisa, ukukopa okanye ikhonkco liyavela. Kuya kufuneka uqhelane nokuyisebenzisa kuba xa ndikopa umculo wam ekwahluleni kwam ukuya kwi-hard drive, ngempazamo ndahambisa iifolda ezininzi. Oku kunemveliso ngakumbi, kodwa ukuya phambili siya kubamba iCtrl ukuba ikope okanye iShift ihambe. Inketho yokuHamba ilunge kakhulu, umzekelo, xa ususa iifayile kwiidrive ezisuswayo ayizibeki kwifolda / .trash.
Kubonakala kubalulekile ukukhankanya ukuba inyani yokuba zikhona Ukuhambisa okanye ukukopa ukhetho kunokuba yingxaki ukuba asithathi ingqalelo. Umzekelo, ukuba sifuna ukutsala umfanekiso kwiprojekthi ye-GIMP kuya kufuneka sicinezele i-Ctrl ukuyikopa kungenjalo ayizukuyenza nto.
Ewe inendawo ebuthathaka: uKubuntu uthathe isigqibo sokongeza ukhuseleko ukuze singenzi iimpazamo njengale ndiyenze kutshanje xa ndicima ulwahlulo lwe-EFI ngenxa yengxaki endandinayo xa ndandifaka i-Android-x86. Into abayenzileyo ibiyiyo sithintele ekusebenziseni iDolphin njengengcambu, enokuthi ibe yingxaki ngamanye amaxesha. Ukuba sifuna amalungelo angaphezulu kuya kufuneka sifake omnye umphathi wefestile ongayivumeliyo, njengeNautilus (Sudo nautilus). Oku kuyenzeka nakwisihleli sokubhaliweyo seKate.
Qalisa imenyu ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo
Imenyu yokuqalisa yenye yala manqaku ekuya kufuneka siqhelane nawo. Emva kweminyaka yobunye kunye ne-GNOME ngoku, a ukuqala kwendabuko Kubonakala kungaqhelekanga, kodwa sinezinto ezintathu onokukhetha kuzo:
Ukuqaliswa kwesicelo yinto ezayo ngokungagqibekanga. Kule ndlela sinokubona izinto ozithandayo ngokukhawuleza xa sicofa kwimenyu yokuqala nasekunene, iiNkqubo, izixhobo, iMbali kunye nokuPhuma.
Imenyu yezicelo Yeyona menyu yakudala ikhumbuza iMATE okanye iWindows XP / 95. Kuyo siza kubona intandokazi ngasekhohlo kunye neemenyu zokuhla ezantsi ngasekunene.
Isicelo seDashboard Yeyona nto ikufutshane ekukhetheni okukhoyo ku-Ubuntu.
Lo ngomnye wemisebenzi endiyithanda kakhulu kwaye andazi ukuba iyafumaneka kwezinye iinguqulelo ze-Ubuntu. Ngaba yonke-in-nye yokukhangela, ukubala kunye neminye imisebenzi. Ivumela kuphela ukukhangela i-PC yethu, kodwa kunye nokukhangela kwiwebhu. Ukuba siyidibanisa kunye neDuckDuckGo, imveliso iya kuphindaphindeka ngamanani amaninzi.
Siza kufikelela I-KRunner ngokucinezela i-Alt + Space okanye Alt + F2 (kwimeko yam kuphela kukhetho lokuqala olusebenzayo). Ibhokisi encinci yokufaka isicatshulwa iya kuvela kwiziko eliphezulu lesikrini. Ukufumanisa ukuba singenza ntoni, siya kuvula «Iindlela ezimfutshane zewebhu» kwaye sijonge. Umzekelo, ukuba sibeka «1 + 1» ngokuthe ngqo iya kusibeka «2». Ukuba sibeka "dd hello" iya kujonga u "molo" kwiDuckDuckGo. Ukuba senza njalo ngo "gg" siya kukhangela kuGoogle. Kodwa njengomsebenzisi weDuckDuckGo ndifuna nje ukukhumbula "dd": ukuba ndifuna ukukhangela ividiyo yeYouTube ndiza kuyichwetheza "dd! Yt search", apho "ukukhangela" yeyona nto ndifuna ukuyikhangela, kwaye "dd" Ndicele ukuba ndisebenzise iDuckDuckGo, "! Yt» Uya kuthi kwiDuckDuckGo ukhangele iYouTube kwaye siza kukhangela ngqo kwinkonzo yevidiyo kaGoogle.
Los ii-bangs nguDuckDuckGo zizizathu ezichanekileyo zokusebenzisa isifumanisi sedada. Ilula nje into yokuba ukuba sifuna ukuhlala sisebenzisa uGoogle kuya kufuneka siqhelane nokongeza u "! G" ngaphandle kwezicatshulwa ngaphambili, ngasemva okanye embindini wokukhangela. Into elungileyo kukufunda ezinye ii-bangs ezinje:
! g yegoogle.
! Imifanekiso kaGoogle.
iphasiwedi X, apho "x" linani loonobumba esifuna ukuvelisa igama eligqithisiweyo.
ra isetyenziselwa ukuchaza amagama. Ifanele ukuyenza yodwa, kodwa ayisebenzi kum.
kwaye ke amakhulu amakhetho.
Izinto ezibonakalayo okanye iiwijethi
Izinto zemizobo eKubuntu
Bayababiza Izinto zemizobo xa kufuneka sizongeze, kodwa sonke siyazazi njenge "widgets". Ngokuzenzekelayo sinezinto ezinomdla, ezinje ngewotshi, iwotshi yexesha, iindlela ezimfutshane (ezinje ngesibali-manani okanye ikhalenda) okanye ulwazi oluvela kwinkqubo yokubeka iliso, oko kukuthi, imemori ehleliyo. Mna ngokwam ndiyathanda ukuba ujongano olucocekileyo, kodwa ndiyazi ukuba eli luphawu oluya kuthandwa ngabasebenzisi abaninzi, yiyo loo nto ndiyithethayo.
Kukho iiwijethi ezingaphezulu zokukhuphela kwiFumanisa.
Utshintsho lwezinto endizithembileyo
Kodwa ayisiyiyo yonke into egqibeleleyo. Ngamanye amaxesha kunzima ukwenza utshintsho kwaye, umzekelo, Ngokuzenzekelayo asinakho ukumilisela iTheminali (Konsole) ngonqamulelo lweCtrl + Alt + T kuba yabelwe "Umsebenzi omtsha". Njengoko yinto endingazange ndayisebenzisa (indlela emfutshane yomsebenzi), ndaye ndaya kukhetho / iindlela ezimfutshane / cofa ekunene / Entsha / indlela emfutshane / iodolo okanye i-URL, apho ndongeze khona amagqabantshintshi, indibaniselwano yezitshixo kwaye ndacwangcisa umthetho « konsole »kwithebhu yesithathu. Ewe unako, kodwa kuya kufuneka uyongeze. Ke ndongeze ukhetho lokubulala usetyenziso, yiyo loo nto ndiligqithile.
Inye into endiyithandayo ngo-Ubuntu 18.10 yayikukuKhanya kobusuku, oko kukuthi, ebusuku kuguqula umbala wekrini, kususe iithoni eziluhlaza ukuze umzimba wethu "uqonde" ukuba kuya kurhatyela, uqala ukukhululeka kwaye silale ngcono nangakumbi kungekudala. Le ayikho eKubuntu, ke kuya kufuneka nditsale I-RedShift. Ayinakulungiswa kwaye ayithembeki kakhulu, kodwa singasoloko siyisebenzisa ngesandla.
Ndingaphila naloo nto
OLUHLAZIYIWEYONjengeVampire yasebusuku kunye nezimvo ze-newbie kumagqabantshintshi, inokuguqulwa ukusuka kuseto.
Andazi ukuba ndiyathanda ukuba kubonakala ngathi UKubuntu akaze aqale kwasekuqaleniOko kukuthi, nokuba singaqala kwakhona, iya kuvula zonke iinkqubo ebesizivulile xa ingena kwakhona. Oku kunokuba yinto edidayo ukuba, umzekelo, sishiye i-KTorrent ivuliwe kwitreyi, asiyiboni i-icon, siqala kwaye xa singena siyibona kwiscreen. Ndijonge useto ukuze ndibone ukuba ndinokukhetha na ukuqala kwenkqubo, kodwa hayi. Ndaye ndakhumbula ukuba uKubuntu ubuyela kwindawo awayekuyo qho xa ndiyilayita.
Nangona kanye ngaphakathi ngaphakathi kwemvakalelo kunjalo ngokutyibilikayo, kuthatha ixesha elide ukuqala kwaye ucime. Ndicinga ukuba yonke into iphuculwe ngokuhlaziya iPlasma kwinguqu yayo yamva nje, kodwa isacotha malunga noku. Ngayiphi na imeko, ndikhetha ukudodobala ngaloo maxesha kunokulahleka kokutyibilika xa inkqubo sele iqalile.
Ukubeka konke kwisikali UKubuntu uhlala kwiPC yam kwaye ayithandi into eyenzekileyo kumfanekiso we-header okhuthaze amakhulu ee-meme. Kwaye ndikweyisile ukuba usebenzise le nkqubo yokusebenza inkulu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Kubuntu » Ndizamile uKubuntu kwakhona kwaye ndonwabile. Ndikuxelela ukuba kutheni
NgoPiqué apho, uqinisekile ukuba uyahamba. XD
jajajajajajajajajajaja sendisele nditshilo ekugqibeleni, ukuba lo uhlala kwaye akafani nesithombe 😉
Umnqweno wam undixabisile, ndifake uKubunto kwaye ndifake iDropbox esele isiza "evela kumzi-mveliso" kwisifaki sesicelo kwaye ndiyasebenza ngaphandle kwengxaki. 🙂
Molo Malcrat. Uthetha ukufumanisa (iziko lesoftware)? Kugqityiwe kakhulu. Mhlawumbi yinguqulelo yepakethe ye-snap. Ndikwacebisa ukuba ulandele isifundo sethu ukubandakanya iiphakheji zeFlathub Flatpak. Umzekelo, iiPulseeffets azikho njenge-snap kwaye xa uyifaka ibeka ukuxhomekeka okukhulu kuyo. Ndayikhangela emva kokufaka iPappak kwaye ukuba yayinjalo. Zezona zinokwenzeka ngakumbi.
Ngaba ufake iDropbox, iyasebenza?
Molo Malcrat. Khange ndizame kwaye ngekhe ndikwazi ukuzama de kube nguLwesibini.
Iinkonzo zethekhnoloji ye-DigitOptic sitsho
Ndisebenzisa i-KDE-Neon 18.04 (Ifana neKubuntu kodwa iPlasma yanamhlanje) kwaye isebenza kakuhle !!!
Phendula kwiiDigitOptic Technology Services
UJose Francisco Barrantes umfanekiso obambe indawo sitsho
Ngengozi. . . Izolo Namhlanje) ?????? Ndigqibile ukuyifaka phantse nge-1: 00 AM ~ CR intle endiyithandayo yeLinux !!! ???
Phendula kuJose Francisco Barrantes
Hephaestus Mephisto sitsho
Ewe, khange ndibenangxaki nefedora yam, inguhlobo olungaphezulu kwama-28, ndiyazi ukuba yinto endala, indikhonze kuyo yonke into, khange ndibenengozi kwaye ukuba ndinayo ne-kde yiyo lonto yibeke phezulu.
Phendula Hephaestus Mephisto
Molo, Hephaestus. Ndihlala ndithetha ngeelaptop yam, ebangela iingxaki. Ngapha koko, ndiyishiyele umalume womhlobo wekhompyuter ukuba abeke iWindows ngokusemthethweni kwaye ndinayo xa kunokwenzeka, okanye ndiza kuyithengisa. Ndithenge enye kolunye uphawu esele indenzele kakuhle ngaphambili. Xa ndizama iminyaka eyi-3-4 eyadlulayo, iplasma ibingandihambeli kakuhle, kwaye kuye kwafuneka songeze ingxaki ye-wifi ebendinayo ngazo zonke iinguqulelo zeLinux. Kodwa kwezi ntsuku zimbalwa ndizizamile kwaye ndiye ndathandana. Andisaguquki. Yonke into oyizamayo ngoku iya kuba kwi-LiveUSB okanye kwi-Virtualbox.
Ukulungisa ukubuntu kungaqali ekuqaleni, jonga ukuqalisa kunye nokucima useto kwinkqubo ye-kubuntu.
Molo Zun sitsho
Ndiyamthanda uKubuntu kudala ndiyisebenzisa…. ngakumbi ukusasaza okoko i-OBS ingene kwihlabathi leLinux konke okube luthando!
Phendula kuAlo Zun
UMario Zamora Madriz sitsho
Kuya kufuneka uzame iManjaro KDE, kubonakala kum ngathi inezinto ezininzi ezipholileyo kwaye yiRolling Release
Phendula uMario Zamora Madriz
UFrancisco Javier Castillo Diaz sitsho
Ewe, ndikhetha i-xubuntu, elula, kodwa intle
Phendula uFrancisco Javier Castillo Díaz
UAndreale Dicam sitsho
I-Kubuntu yenye yeemeko ezinqabileyo ezikhoyo ngaphakathi kwe-KDE ecosystem kuba ngokobuqu ihlonipha izimvo eziphikisanayo, kufuneka ifakwe yi-KDE Neon, eneneni, bobabini bangabenkampani yeBlueSystems efanayo. Ekuphela kwento enokuhlawulelwa malunga neKubuntu yinguqulelo yayo ye-LTS enika inguqulelo yePlasma LTS (okwangoku eyi-5.12) egqibeleleyo yezokusebenzela. Ngaphandle koko ithathelwe indawo ngokupheleleyo kwaye ithathelwe indawo yi-KDE Neon.
I-KDE Neon yi-KDE® esemthethweni kunye ne-K Desktop ye-Environment repository (i-Rolling Release model model) kwaye ixutywe kunye ne-Ubuntu LTS yokugcina (i-Point Release development model), ibe yimpumelelo yobunjineli kuba ezi zimbini zichasene ngokuthe ngqo kwaye zihambelana nazo Umsebenzi omninzi kunye namava ngenxa yokungahambelani kokuxhomekeka. Iziphumo, ukuhanjiswa okuzinzileyo kunye nezinto zamva nje kwiPlasma. Lo mqondo woyisa kuwo onke amacala oko kuzanywa ziinguqulelo ezingezizo ze-LTS zeKubuntu ezinyanzela ukufaka indawo yokugcina yaseKubuntu ukuzama ukuyifanisa nayo, kodwa indawo yokugcina iNeon ngokuqinisekileyo igqibelele kwaye idityanisiwe.
I-BlueSystems kufuneka inikezele ngolwabiwo olunye olunika abasebenzisi bayo inguqulelo yePlasma LTS (Kubuntu) kunye nenguqulelo yePlasma Rolling Release (KDE Neon). Kucacile ukuba ayinakwenza njalo phantsi kobulungu be "Kubuntu" nanjengoko iyeyeCanonical, kwaye ubudlelwane phakathi kwezi nkampani zimbini bebungavisisani emva kokuba iBlueSystems igqibe kwelokuba izise abaphuhlisi abaphambili ukuba basebenze nabo, kubandakanya UJonathan Riddell.oyena mntu ubaluleke kakhulu enegalelo kwimbali ye-Ubuntu kunye nenkokheli yangoku ye KDE Neon, emva kweCanonical efulathele ukubuyela ku-Kubuntu. Isisombululo kukusebenzisa uphawu lwe KDE Neon. Ngokuqinisekileyo kufuneka kubekho imeko yezoqoqosho ethintela iBlueSystems ekubeni ithathe ulawulo oluchanekileyo lwenguqulo yePlasma ye KDE kwaye idibanise ezi zinto zikhankanyiweyo.
Phendula u-Andreale Dicam
UJosue Mogollon sitsho
UCarlos Caguana: v hahaha
Phendula uJosue Mogollon
UJohn Baker Silva Moncaleano sitsho
Kwaye kuhamba njani Kubuntu vs ubuntu?
Phendula kuJohn Baker Silva Moncaleano
Buf, ngayiphi indlela? Ndingakuxelela ukuba uKubuntu ugqitha Ubuntu kuyo yonke into, ngaphandle kokuhambelana okunokubangela iingxaki ezincinci kwi-PC. IPlasma ibonelela kakhulu kwaye phakathi kwento ekunikezela ngayo unokufumana impazamo. Yiloo nto ibisenzeka kum kwiLaptop yam, kodwa bayilungisile.
Ndingayishwankathela ngelithi Ubuntu bunokuthenjwa ngakumbi, kodwa uKubuntu ukhaphukhaphu, unokwenza ngokwezifiso ngakumbi kwaye mhle. Ukuba unako, yenza i-LiveUSB kwaye, ngolunye usuku unako, yisebenzise iiyure ezininzi ujonge ukuba iyakusebenzela kwaye yonke into oyifunayo isebenza NGAPHANDLE KWENGXAKI nakwiPC yakho.
Ewe, hayi, awundiqinisekisi ukuba ndiyifakele, nangaliphi na ixesha xa ndizamile iplasma ndiyilahlile ngokusebenza, ndiyayibona intle, kodwa ayisebenzi okanye ayilulanga. Ngokulula kunonqakrazo lwe icon kwaye usebenze akukho nto, xfce nee icon zakho kwiphaneli yesitayile sewimdows kwaye yiyo loo nto, ucofa kanye kwaye ivule, yonke enye into ndibona iingxaki, ukuba ufuna ukulula, ukusebenza kakuhle, uzinzo olukhulu kwaye ukukhanya kobusiba xfce, ukuba ufuna ukubenza nzima ubomi bakho kuba uyayithanda i-kde.
Kukho ividiyo kwibhokisi yakho ye-xD
Ndizamile ukuya kwi KDE amatyeli aliqela, kodwa iyacotha kwikhompyuter yam, andinakuqhela kwivenkile yokuFumanisa, ndisebenzisa iinkonzo zikaGoogle kwaye andikwazi ukuvumelanisa abafowunelwa kunye nekhalenda kwizicelo ezingagqibekanga nokuba.
Kubonakala kum ukuba inendawo entle, enamandla kwaye enokwenzeka ukuba yenzeke kodwa ndiza kuhlala ndinamathele kwi-GNOME.
Ubusuku beVampire sitsho
Pablinux, ukuze iinkqubo ozivulileyo zingavulwa qho xa ungena, kuya kufuneka uye kwicandelo "Lokuqalisa kunye nokucima" nalapho kwicandelo le "Desktop Session" (Qala kwaye uphume kwi desktop) kwi ibhokisi "Xa ungena", khetha ukhetho "Qala ngeseshoni engenanto". Ngale ndlela ayizukuphinda ibuyise iinkqubo owawuzivulile.
Phendula kwiVampire yasebusuku
Molo, vampire yasebusuku. Ndiya kuyenza xa ndifumana iPc yam entsha kwaye ndifake uKubuntu kuyo. Unokukhetha okuninzi kwaye inyani kukuba khange ndiqwalasele ukuba oku kungatshintshwa. Ndihlela iposti 😉
Ndicinga into efana naleyo ndiyiphawulileyo kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo 🙁
Molo, newbie. Ewe, khange ndiyibone. Ndikongeza kwiposti. Ndiyabulela nakuwe?
Enkosi ngokuzisa ulwazi kwihlabathi.
Ngokukodwa bendisebenzisa uKubuntu ishumi leminyaka. Ndifaka iinguqulelo kunye nohlaziyo kwaye ngaphandle kweengxaki ezivelileyo, njengakwezinye ii-distros, ndiyaqhubeka noBuntu.
Ndicebisa kakhulu digikam.
Ngendlela ... ayisebenzi iDropBox kuphela, kodwa neMega.
Kuyamangalisa ukufunda iikhomenti ngokusekwe kukungazi kunye nezinto ozithandayo (abanye bathanda abafazi, abanye amadoda ... nabanye abaninzi embindini). Kwaye inqaku elilungileyo ... awuyazi indlela yokumisela ukuvala okanye "into endingayithandiyo" kuba awuyazi indlela yokuvula i-terminal ... kakhulu. Ndicinga ukuba ukwenza into enjalo, ubuncinci kukubeka ibhentshi, ukuthelekisa, njl.
Iscrcpy, lawula isixhobo sakho se-Android kwi-Ubuntu desktop
I-Spinnaker, iqonga lomthombo ovulekileyo osasazwa yiNetflix